महिला र पुरुषको विवाहगर्दा कुन उमेर र कति वर्षको फरकमा गर्दा राम्रो मानिन्छ ? | Rajmarga
महिला र पुरुषको विवाहगर्दा कति वर्षको फरकमा गर्दा राम्रो मानिन्छ ? अधिकांश पुरुष आफूभन्दा कम उमेरका लाई विवाह गर्न रुचाउछन् । भविष्यमा त्यही उमेर भिन्नताले यौन जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको पाइदैंन । चिकित्सकहरु विवाहका लागि बढीमा ५ वर्षसम्मको मात्र ग्याप राम्रो हुने बताउछन् । एकै उमेरमा विवाह गर्दा भावनात्मक सम्बन्ध र सोचाइ पनि मिल्ने भएकाले धेरै लामो अन्तरमा विवाह गर्नुहुँदैन ।
तर नेपाली समाजमा १५ वर्षको अन्तरमा पनि विवाह भएको पाइन्छ । प्रायः जोडीको अन्तर १० वर्षको हुन्छ । उमेरको बढी अन्तरले यौनजीवन प्रभावित हुनसक्छ । मानौं १५ वर्षको अन्तरमा विवाह भएको छ भने पुरुषको उमेर ५५ वर्ष पुग्दा महिलाको उमेर ४० मात्र हुन्छ । महिला ४० वर्षमा यौनमा निकै सक्रिय रहन्छन् तर प्रायः पुरुषमा ५५ वर्षको उमेरमा यौनक्षमतामा ह्रास हुँदै गएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यौनकै कारण पारिवारिक समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
उमेरको धेरै ग्यापले यौन भावना पनि अन्तर ल्याउछ । मानिसमा २० देखि ३० वर्षको उमेरसम्म यौन इच्छा सबैभन्दा बढी हुन्छ । प्रायः मानिसको विवाह गर्ने उमेर पनि यही हो । चिकित्सकहरु पुरुषका लागि २८ देखि ३० वर्षको उमेर विवाहका लागि उपयुक्त भएको बताउछन् । महिलाका लागि २५ देखि २८ वर्षको उमेर राम्रो मानिन्छ । तर सेक्सोलोजीष्टहरु यौन चाहनालाई उमेर सीमामा बाध्नु गलत भएको बताउँछन् । उनीहरु यौनलाइ इच्छामा भर पर्ने विषय मान्छन् ।
Previous post: सेक्सले छिट्टो घटाउछ तौल, यस्तो पोजिसन गर्नुहोस् छनोट
Next post: पुरुषको मन, महिलाको शरीर र भर्चुअल रियालिटीको कमाल
घरमा छापा मारेपछि खुल्यो सुन्दरीको वास्तविकता, भित्रको दृश्य देख्दा पुलिसकै उड्यो होस
अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्पको कारको मुल्य कति ? यस्तो छ उनले चड्ने कारको विशेषता
उडिरहेको विमानमा यो जोडीको हर्कत देखेर जिल्ल परे यात्रु, भाइरल भयो भिडियो
चुम्बनको अनौठो तरिका, हेर्नुहोस ७ तस्वीरमा